Fahazarana manampy amin'ny fanamafisana orina ny mpivady | Bezzia
Ny fahazarana manampy amin'ny fanamafisana orina ny mpivady
Maria Jose Roldan | 07/09/2021 22:44 | fifandraisana
Misy zavatra vitsivitsy tsara tarehy kokoa amin'ity fiainana ity noho ny mahay mizara fitiavana amin'ny olon-kafa. Tsy misy olona afaka amin'izy ireo, fa raha vao mahita fitiavana toy izany ianao dia tokony hikarakara azy io mba hisorohana azy tsy hiharatsy. Ho an'izany dia tsara ny mampihatra fahazarana andiana fahazarana izay hahatonga ny fitiavana hijanona ho velona na eo aza ny andro.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hasehontsika anao ny sasany amin'ireo fahazarana tokony hampiharina, ka ny mpivady haharitra tsy misy olana ara-potoana ary ho faly.
2 Manangana tetik'asa iraisana
3 Miresaka firaisana amin'ny vadinao
4 Miaraha matory
5 Mahaiza mamela
6 Manana toerana manokana
Amin'ny mpivady salama, ny fanehoana fitiavana sy fifandraisana ara-batana dia tsy maintsy atao tsy tapaka, noho izany dia ilaina ny mifamihina mandritra ny tontolo andro. Ny famihinana avy amin'ny fo dia fampisehoana fitiavana izay hankamamin'ny mpivady fatratra. Ny famihina tsotra dia toa hadalana amin'ny olona maro, na izany aza, fampisehoana fitiavana izay manampy amin'ny fanamafisana ny mpivady.
Manangana tetik'asa iraisana
Afaka mametraka tetikasa iray ao an-tsaina amin'ny fomba iray, manampy amin'ny fanamafisana ny fifamatorana ao amin'ny mpivady. Ity tetik'asa ity dia mety misy ny fanaovana dia iray na fananganana fianakaviana. Ny fiheveran-tena amin'ny fanaovana zavatra miaraka dia zavatra mahasoa ny mpivady.
Miresaka firaisana amin'ny vadinao
Ny firaisana ara-nofo miaraka amin'ny olon-tiana dia ankafizina tanteraka rehefa samy miresaka momba izany ny olon-droa nefa tsy misy olana ary mampiseho ny zavatra rehetra eritreretiny momba azy. Ny firaisana dia lohahevitra fady ho an'ny mpivady maro ary misy fiatraikany ratsy amin'ny ho avin'izy ireo izany. Tsy tokony hisy karazana olana rehefa miresaka amin'ilay olon-tiana, momba ny lohahevitra toy ny firaisana.
Ny fandriana hatory miaraka amin'ny vadinao dia fihetsika iray izay tena mahasoa ny fifandraisana. Zava-dehibe ny fitazonana ny fifandraisana ara-batana amin'ny faran'ny andro ary hahatsapa ny hoditra sy ny hafanan'ny olona tianao.
Tokony ho fantatrao ny fomba hamelana ny heloky ny vadinao ary hialana amin'ny avonavona amin'ny fotoana rehetra. Tokony hianatra avy amin'ny lesoka ianao ary amin'ity fomba ity dia handeha tsara kokoa ny zava-drehetra eo amin'ny fifandraisana. Ny famelan-keloka amin-kitsimpo dia manampy ny mpivady hahay handresy ireo olana samihafa ary io fahasambarana io no apetraka ao.
Manana toerana manokana
Ny fananana vady dia tsy midika hoe miaraka 24 ora isan'andro ary tsy misy fitsaharana. Ny olona tsirairay dia tokony hanana toerana manokana hahafahany manao izay tiany atao malalaka. Ny fananana an'ity habaka ity dia ilaina sy ilaina mba tsy hijaly mandritra ny taona maro ny mpivady.
Raha fintinina dia ireto no sasany amin'ireo fahazarana tsy maintsy ampiharina mba hahafahana mankafy fifandraisana mahafinaritra mandritra ny taona sy taona maro. Ny fitiavana dia tsy raharaha iray andro ary tsy maintsy karakaraina mitohy mba hankafizanao vady mandritra ny fiainana. Ny fidirana amin'ny faritra mampionona dia tsy tsara amin'ny fifandraisam-pifandraisana satria mihitsoka sy miafara miharatsy tsikelikely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Ny fahazarana manampy amin'ny fanamafisana orina ny mpivady
4 lakilen'ny fampakaram-bady tonga lafatra
Fomba ahazoana hozatra nefa tsy mila lanja